ကုမ္ပဏီ တစ်ခုရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို ဖော်ပြတဲ့ Financial Report များဟာ ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ ???.
ကုမ္ပဏီများ (သို့မဟုတ်) စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကိုက လုပ်ငန်းအတွင်းထည့် ဝင်ထားတဲ့ (သို့မဟုတ်) တနည်းအားဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ ငွေကြေးမှ အကျိုးအမြတ်ရဖို့ရန်အတွက် ရပ်တည်ချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီမှာ ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ကြရာ…အဆိုပါ ရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မှီရန်အတွက်….
မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း Marketing, Sales, HR, Accounting and Finance, Operation, Production, Admin စသည်ဖြင့် Department များစွာ ဖွဲ့စည်းပြီးကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်ကြရလေ့ရှိပါတယ်…
သက်ဆိုင်ရာ Department များ အားလုံးက မိမိ Department ၏ Plan နှင့်Target များကိုပြည့်မှီအောင် ဌါနဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ (Departmental Functions) များကို အကောင်အထည်ဖော်ကြရခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၏ အကျိုးအမြတ်ရလိုမှု့ ကို ဦးတည်သော #ဘုံရည်မှန်းချက် (For makingaprofit working under the same umbrella) ဖြစ်တယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ Department တိုင်းရှိ ဝန်ထမ်းအားလုံးက နားလည်သဘောပေါက်ပြီး တက်ညီလက်ညီဖြင့် စုပေါင်းကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်…
Management မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ စကားလုံး (၂) လုံးကို သတိရတယ်… Line and Staff ပေါ့ Line ဆိုတာကတော့ လုပ်ငန်းရဲ့ ဝင်ငွေရလမ်းအတွက် ရှေ့တန်းက အကျိုးပြုရတဲ့ လူမျိုးပေါ့၊
ဥပမာ Marketing တို့ Sales တို့ Operation တို့လို Function မျိုးတွေပေါ့.......
Staff ကတော့ သူတို့ဟာ ဝင်ငွေရလမ်း အတွက် ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်အကျိုးမပြုကြပဲ Line ကိုရောက်နေတဲ့ လူတွေကို အထောက်အပံံ့ပေးရတဲ့ Supporting Function မျိုးလို့ပြောတယ်…...
ဥပမာ Accounting and Finance, Admin, HR တို့လို Function မျိုးတွေပေါ့…..
ဒီသီအိုရီ ကို လုပ်ငန်းရှင် တော်တော်များများ အသုံးချကြတယ်လို့ ပြောတယ်…
တစ်ချို့ ကုမ္ပဏီတွေဆို Bonus ပေးရင်တောင် Accounting တို့ Admin တို့ကို ထည့်တောင်မတွက်ပဲ Marketing တို့ Sales တို့ကိုပဲ ပေးလေ့ ရှိကြတယ်လို့ပြောတယ်….
အမှန်တော့ သီအိုရီဆိုတာ အမြဲမှန်နေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး အခြေအနေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အသုံးချတက်မှ ပိုအသုံးတည့်မှာပါ…....
အထူးသဖြင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အထူး အပြိုင်အဆိုင်များလာပြီး၊ နည်းပညာတွေ လွှမ်းမိုးလာတဲ့ ယနေလိုခေတ်မျိုးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉ ရာစု၊ ၂၀ ရာစုတို့က ပြုစုထားတဲ့ သီအိုရီတွေက အပြည့်အ၀ မှန်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ…....
အမှန်ကတော့ ဘယ် Department က ဘယ် Plan ကို ဘယ်လိုပဲ အကောင်အထည် ဖော်ဖော် အချိန်တန်ရင် အကျိုးရလဒ်တွေအကုန်လုံးဟာ Accounting Department က ရေးဆွဲပေးလိုက်တဲ့ Financial Report တွေမှာ အချုပ်အနေနဲ့ပေါ်လာမှာပါပဲ…...
အဲဒါကြောင့် တစ်လတစ်ခါ Management (or) BOD Meeting လုပ်ပြီး ဌါနပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးကြရင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၏ အကျိုးအမြတ်ရလိုမှု့ ကို ဦးတည်တဲ့ #ဘုံရည်မှန်းချက် ကို ပြည့်မှီမမှီ သိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး…..
မပြည့်မှီရင် Market Plan ကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ နေရာမှာ လိုနေသလား??? (သို့) Marketing Plan က လက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ အလှမ်းဝေးနေ သလား???…….
Sales Team ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု့ကို မြှင့်တင်ဖို့လိုနေသလား…???…..
(သို့မဟုတ်) ဈေးကွက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်မှု့တွေ မတရားများနေလို့ မိမိထုတ်ကုန်ကို ဈေးလျှော့ပြီး ရောင်းနေရခြင်းကြောင့်….အမြတ်နည်းနေသလား???.
(သို့) Operation က အလုပ်လုပ်တာ တစ်ခုခု လိုအပ်နေလို့ စရိတ်တွေမလိုအပ်ပဲ များနေလို့ အရှုံးပြနေသလား ??? (သို့) HR က မလိုအပ်ဘဲ ဝန်ထမ်းတွေများများစားစားခန့်ထားတဲ့အတွက် လစာတွေများနေသလား???……
စသည်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၏ အကျိုးအမြတ်ရလိုမှု့ ကို ဦးတည်သော #ဘုံရည်မှန်းချက်များ အတွက် (#လားပေါင်းများစွာသောမေးခွန်းတွေအတွက် #Financial_Report တွေကို သေချာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ခြင်း (Analysis) လုပ်ကြည့်မှပဲ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး…..
၎င်းအဖြေများကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်မှသာလျှင်....သင့်လျှော် မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်ကြမှာပါ…
ဒါအပြင်…..Financial Report များသည်…လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ စွန့်စားရမှု့အခြေအနေ၊ အမြတ်ရနိုင်မှု့........
ပိုင်ဆိုင်မှု့များကို သုံးစွဲနိုင်မှု့အခြေအနေ....ငွေဖြစ်လွယ်မှု့ အကြွေးပေးဆပ်နိုင်မှု့ အခြေအနေ၊
အတိတ်၊ ပစ္စပ္ပုန် နှင့် အနာဂတ် အတွက် လုပ်ငန်းကြီးထွားမှု့နှုန်း.၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု့၊ ရင်းနှီးငွေ ရှာထားမှု့.....
အဆိုပါ ရင်နှီးငွေအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှု့မှ ဖြစ်ထွန်းလာသော အကျိုးအမြတ်များ၊ မိမိလုပ်ငန်း အောင်မြင်ရန်အတွက် တိုင်းတာနိုင်သော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု့ဆိုင်ရာ ညွန်းကိန်းများ၊
အဓိက Company ၏ အရင်းအမြစ်များကို ခွဲဲခြား လေ့လာနိုင်မည့် ကုမ္ပဏီ ၏ #ပင်မအစီရင်ခံစာ မျိုးဖြစ်ရာ.............
မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများအား ဦးစီး လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များ.....
ယခုမှ လုပ်ငန်း စတင်ထူထောင် နေသော Start-up လုပ်ငန်းရှင်များ......
ပြည်တွင်း ပြည်ပ Company များ၏ စာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဌါနများ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော Working Executives များ......
မိမိတာဝန်ပေါ်မူတည်ပြီး အရေးကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရသော Management Level People များ ......
အားလုံးဟာ မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက် Financial Report ကပြောသော အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်မှု့များကို မဖြစ်မနေ ကျွမ်းကျင်စွာ နားလည်ထားရန် လိုအပ်တဲ့အတွက်
Financial Report တွေဟာ အရမ်း အရေးကြီးကြောင်း နှင့် မိမိ လုပ်ငန်းရဲ့ Accounting Department မှ ပြုစုထားသော ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို Decision Making အတွက်….အပြည့်အ၀ အသုံးချကြဖို့ ပြောကြားလိုရင်းသာ….